Huawei Mate 30 သည်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများမပါ။ သင်သိထားသင့်သမျှ | Gadget သတင်း
ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့တွင် Huawei Mate 30 အမျိုးအစားသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ဖုန်းအသစ်နှစ်ခုနဲ့။ ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းသောကင်မရာများရှိသော်လည်း Google applications နှင့် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမရှိခြင်းဖြစ်သည် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကခေါင်းစဉ်များနှင့် Android ၏ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကဘာလဲ။
ကုမ္မဏီသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်း ၎င်းသည် Huawei Mate 30 ၏ဤအကွာအဝေးကိုအပြည့်အဝသက်ရောက်စေသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဖုန်းများသည် Android ၏ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် version ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသော်လည်း Google application များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမရရှိပါ။
1 Google Apps နှင့် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမရှိပါ
2 အစား Huawei Mate 30 မှာဘာရှိသလဲ။
3 Android Open Source ဖြစ်သည်
Google Apps နှင့် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမရှိပါ
Google Apps ကိုဖုန်းများပေါ်တွင်ပုံမှန်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုနိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကိုတပ်ဆင်ထားတော့မည်မဟုတ်ပါ ဤမော်ဒယ်များတွင်ဤ Huawei Mate 30. တွင်မူလဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖုန်းများတွင် Google Play၊ အက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ် Maps, Gmail သို့မဟုတ် Assistant ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုအစပိုင်း၌ download လုပ်၍ မရပါ။
Huawei မှယင်းတို့ကိုလက်လှမ်းမီမှုအားလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်ဟုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်နည်းလမ်းကိုမူမဖော်ပြနိုင်ပါ။ Huawei Mate 30 သည်ဈေးကွက်တွင် Google Play ၀ န်ဆောင်မှုများမရရှိသည့်ပထမဆုံးဖုန်းများမဟုတ်ပါ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မော်ဒယ်များသည်သူတို့မပါဘဲရောက်လာသည်ဤကိစ္စတွင်သာတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဖုန်းများသည်၎င်းတို့အားမူလအတိုင်းမထားပါ။ ဤအကွာအဝေးရှိဖုန်းကိုဖွင့်ခြင်းသည်အခြား Android မော်ဒယ်များနှင့်မတူပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တူညီသော application များသို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုဖြင့် log in လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤ Huawei Mate 30 ကိုအာမခံချက်ပေးသည် ၎င်းတို့သည် YouTube၊ Gmail သို့မဟုတ် Google Maps ကဲ့သို့သော application များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ သူတို့သာပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်လာကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါနှင့်ယခုအချိန်တွင်သူကသူတို့မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်နိုင်အောင်အသုံးပြုသူများအားပေးလိမ့်မည်ဟုနည်းလမ်းမသိရသေး။
applications များတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ယခုအချိန်အထိသံသယဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများ (သို့) ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများရရှိနိုင်မလဲ ဤအပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုပေါ်မှာ။ ဤသည်မှာ၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသင့်သည်။
အစား Huawei Mate 30 မှာဘာရှိသလဲ။
Google Play ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများမရှိခြင်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် HSM (Huawei Mobile Services) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားခဲ့သည် ဖုန်းနှစ်ခုလုံးတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် App Gallery ရှိသည့်အပြင်။ Huawei Mate 11.000 ရှိအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ထဲ၌ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကုမ္ပဏီမှ၎င်းတွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များတိုးချဲ့ရန်အတွက်လက်ရှိအချိန်တွင် ၁၁,၀၀၀ ကျော်ကိုပြုလုပ်နေသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, လက်မှတ်ထိုးကတည်းက HSM ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂျီအက်စ်အမ်၊ GPS နှင့်မြေပုံများမိတ်ဆက်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့် Android ဖုန်းတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာဒီမော်ဒယ်တွေမှာမရှိတော့ပါဘူး။ အများဆုံးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်မြေပုံများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ သူတို့ကသူတို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလတွင်တရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂူးဂဲလ်မြေပုံတစ်ခု၊ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်မှဖြစ်သည်။
Android ရှိပုံမှန် application အချို့ကိုလည်းအစားထိုးလိမ့်မည်။ ဤပိတ်ပင်တားဆီးမှုကသင့်အားဖုန်းများပေါ်တွင် Google Assistant ကိုအသုံးမပြုနိုင်ရန်တားဆီးသည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကို Huawei Assistant နဲ့ထားခဲ့တယ်၎င်းသည် Huawei Mate 30 အတွက်ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်များသောအားဖြင့် Google assistant တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်ခြင်း၊ အပလီကေးရှင်းများဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအရာများကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့် Google assistant မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးမဟုတ်နိုင်သော်လည်း
Android Open Source ဖြစ်သည်
အခြားကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာ Huawei Mate 30 သည် Android open source ကိုအသုံးပြုသည်။ ယူအက်စ်ပိတ်ဆို့မှုကသူတို့ကိုအသုံးပြုလိုသောမည်သူမဆိုရရှိနိုင်သောလည်ပတ်စနစ်၏ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုရန်သူတို့ကိုဖိအားပေးသည်။ EMUI 10 ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအလွှာကို Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြရသည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Android open source ဖြစ်သော version 10 တွင်ဤကိစ္စတွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ လုံခြုံရေး updates များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် အချိန်တိုင်း။ ဒါကြောင့်ဖုန်းတွေကိုခြိမ်းခြောက်မှုကနေကာကွယ်လိမ့်မယ်။ အနာဂတ်လည်ပတ်မှုစနစ်၏မူကွဲများကိုဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းမပါဘဲဤပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဗားရှင်းတွင်လည်းလက်ခံလိမ့်မည်။
EMUI 10 မျက်နှာပြင်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်လိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့နောက်နှစ် EMUI 11 သို့ပြောင်းရွှေ့။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ယခင်အလွှာ၏မူကွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြောင်းအလဲများစွာမပြုလုပ်သင့်ပါ။
သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် Huawei သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပြသခဲ့သည်။ HarmonyOS ကိုခေါ်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား၊ စပီကာနှင့်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုတယ်လီဖုန်းများတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုမတားမြစ်ပါ။
HarmonyOS ဖုန်းတွေမှာသုံးဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမယ့်ထို့ကြောင့် Huawei Mate 30. သို့မရောက်ရှိသေးပါ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်က၎င်း၏ ဦး စားပေးမှုမှာ Android ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်း operating system အသုံးပြုမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အချို့သောမီဒီယာများတွင်ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပြောဆိုမှုများရှိသော်လည်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်နှစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ဒီတော့အဲဒါကဖြစ်ဆဲဖြစ်ပေမယ့်တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ခဏကြာလိမ့်မယ်။
မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်၎င်း operating system ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများတွင်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်ဟုမသတ်မှတ်သင့်ပါ။ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဆက်ဆံရေးသည်အပျက်သဘောဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်သို့သော်အမှတ်တံဆိပ်သည် Android ကို၎င်း၏ဖုန်းများပေါ်တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » Huawei Mate 30 သည်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းမပါဘဲ - သင်သိထားရန်လိုအပ်သည်
Huawei Watch GT 2: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်နာရီသစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်